Ahoana ny fomba hisorohana ny fitohanana amin'ny alika kely ... Alika Manerantany
Ny fitohanana dia mitranga rehefa mijanona maharitra ao amin'ny zanaky ny alika mandritra ny fotoana maharitra ny fako mivaingana, ary mitroka ny atin'ny hamandoana rehetra. Miaraka amin'izany, fivalanana lasa mafy sy maina, izay miteraka fahasahiranana rehefa mikotraka.
Amin'ny ankapobeny, ny alika kely mahasalama dia mahavita mandrehitra in-droa na intelo isan'andro, fotoana fohy aorian'ny famahanana. Mahatonga ny sasany io aretina io fihetsiky ny tsinay tsy fahita firyRaha ny momba ny alika kely dia mitolona izy ary sahirana amin'ny fandosiran-jaza tsara. Ny fitohanana amin'ny alika kely dia mety hiteraka antony maro, toy ny tsy fahampian'ny fibre sy rano.
Indraindray ny fitohanana dia mety hiteraka olana lehibe kokoa koa, toy ny fanakanana ny tsinay. Ny fitohanana dia tsy zavatra mitranga matetika, na izany aza, rehefa mitranga izany dia miaina ny alika kely alika a mahatsapa volo sy tsy mahazo aina.
Rehefa alika kely ny alika kely iray, mety mila miezaka mafy ianao hanao izany ary mety hahatsapa fanaintainana ianao. Azo inoana fa tsy hahazo seza kely dia kely fotsiny ianao handalo, ary mety ho mafy be izany.
Amin'ny toe-javatra sarotra kokoa, ny alika kely noho ny fitohanana, mety ho tsy misy lisitra. Betsaka ny antony mahatonga ny fitohizan'ny alika kely, ny sasany amin'izany dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe raha tsy ampiharina haingana araka izay azo atao ny fitsaboana voalaza.
Ny antony mahazatra mahatonga ny fitohanana amin'ny alika kely dia:
2 Fiovana tampoka amin'ny sakafon'alika
3 Ny fihinanana zavatra tsy azo levona
4 Torohevitra hisorohana ny alika kely noho ny fitohanana ny alika kely
Ny puppy dia mety hanjary tsy ho voakarakara raha tsy ampy ny rano na ny tavy ao aminy. Izany no antony amporisiho ny alika kely hisotro rano bebe kokoa.
Puppy matetika tokony hisotro rano 1/4 litatra farafahakeliny ianao isaky ny lanja 500kg. Raha mafana be na maina be ny andro, na raha manao fanatanjahan-tena be dia be ny alika kely dia omeo rano fanampiny izy.
Azonao atao koa ny mampiditra kely fibre bebe kokoa amin'ny sakafon-jaza, ampiana ohatra: voatavo eran'ny sotrokely ao anaty sakafony.
Fiovana tampoka amin'ny sakafon'alika
Raha ny sakafon'ilay alika kely dia navadika ho marika hafa na karazany hafa, toy ny sakafo am-bifotsy ka hatramin'ny sakafo maina, dia mety hiteraka fitohanana ny alika raha ny fiovana tampoka fa tsy miadana.
Ny fihinanana zavatra tsy azo levona
Indraindray ny kibon'ny alika kely dia vokatry ny a sakana ny tsinay ateraky ny alika mihinana zavatra tsy voky, toy ny kilalao plastika kely, ba kiraro na entana ao an-trano.
Torohevitra hisorohana ny alika kely noho ny fitohanana ny alika kely
Ny fitohanana dia mety miteraka olana ara-pahasalamana lehibe eo amin'ny alika kely, noho izany antony izany no mety:
Zahao ny sakafon'alika: mila mampiasa vola amin'ny alika saka ianao avo lenta, izay misy fibre betsaka ary tsy dia voarindra loatra. Toy izany koa, aza atao fanomezana mamy be loatra satria mety hanasarotana ny fandevonan-kanina ary hiteraka fitohanana.
Manomàna fandaharam-potoana fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka: Ny famelana ny alika ho lasa tsy mavitrika dia mampiadana ny rafi-pandevonan-kanina izay mety hiteraka fitohanana. ny fanatanjahan-tena tsy tapaka mitazona ny vatanao iray manontolo handeha tsara foana izany.
Sakafo alika ihany no fahano aminy: Fahadisoana iray ataon'ny tompona alika kely dia ny mieritreritra fa izay hanin'ny olona dia mety ho an'ny biby fiompy ihany koa. Sakafo maha-olombelona sasany afaka mandrangitra ny fandevonan-kanina ary amin'ny tranga ratsy indrindra, ny poizina.
Zava-dehibe ny fihinanana tsiranoka ampy- Tokony hanana famatsian-drano madio sy madio hatrany ny alika kely. Tsiranoka bebe kokoa, indrindra rehefa mafana be na rehefa nafana be ilay alika.
Tsy tokony hanome laxatives olombelona alika mihitsy isika. Ireo dia natao hampiasaina amin'ny olombelona ihany fa tsy amin'ny biby. Amin'ny fanomezana azy ireo ny biby fiompinao dia mety hampidi-doza anao izany. Na izany na tsy izany, misy laxatives natao manokana ho an'ny biby fiompy.
Anisan'ireo fitsaboana mahazatra indrindra amin'ny tranga fitohanana amin'ny alika kely izay azontsika lazaina ireto manaraka ireto:
Laxatives ho an'ny biby fiompy.
Sakafo manokana ho an'ny alika.
Fanatanjahan-tena sy hydration.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana ny fomba hisorohana ny fitohanana amin'ny alika kely